HALATRA BATERIA TENY ANOSIBE – ANDAVAMAMBA : Nifanenjehan’ny mponina ilay jiolahy
Tranga matetika mpiseho eto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa ny halatra bateria. 11 septembre 2019
Ny alahady 08 septambra lasa teo izao dia mpangalatra baterian’ny fiara eny amin’ny faritra Anosibe sy Andavamamba iny no hitan’ny tompona fiara nanala ny bateriany ary dia nifanenjehan’ny olona teny amin’ny manodidina ilay olon-dratsy ka tra-tehaka teny Andavamamba.
Taorian’izay dia naterin’ny olona teny amin’ny Paositry ny Polisy Ilanivato ity farany nanaovana fanadihadiana. Niaiky ny heloka vitany izy ary tsy vao izy no nangalatra bateria ana fiara fa efa fanaony matetika. Eny Andavamamba sy Anosibe ny toerana tena fanaovanany azy. Efa natolotra ny Fitsarana moa ity lehilahy ity no sady efa nidoboka am-ponja vonjimaika rahateo koa.